?Annagaa dalbanay Ciidanka oo waliba lugahayaga ugu tagnay madaxweynaha Puntland, annagoo u sheegnay Mudug inay ciidamo u baahan-tahay? Duqa Gaalkacyo Siciid. – Radio Daljir
Luulyo 24, 2012 8:54 b 0
Gaalkacyo, July, 24 ? Duqa degmada Gaalkacyo? Col: Siciid Cabdi faarax ayaa sheegay in magaalada Gaalkacyo lakeenay cutubyo ciidamo ah oo sugaya ammaanka magaalada, kuwaasoo ka kala yimid dhammaanba gobollada Puntland.
Duqa Gaalkacyo Col: Siciid Cabdi Faarax oo ka mida guddiga amniga ayaa hadalkaan ka jeediyay shir-saxaafadeed uu ku qabtay magaalada Gaalkacyo,? waxaana uu tilmaamay inay wali-dhimanyihiin ciidamo hor-leh oo qayb-ka ah kuwa sugaya ammaanka magaalada Gaalkacyo.
Siciid Cabdi Faarax waxaa uu sheegay in ciidamadaan aysan shacabka ku dhaqan Gaalkacyo u gaysanaynin wax-dhibaato ah, ujeedaduna tahay sidii gobolka looga sifayn-lahaa kooxaha burcad-badeedda, Al-shabaab, iyo cid-kasta oo ammaanka gobolka lidi-ku ah.
?Innagaa dalbanay ciidanka oo waliba lugaheena ugu tagnay madaxweynaha Puntland Dr Faroole, waxaanu u sheegnay Mudug inay ciidamo xoog-leh u baahan-tahay, codsigii aan annagoo ah guddiga, waxaana shacabka Gaalkacyo aan ka rajaynaynaa inay la shaqayn-doonaan ciidamadaas sifo loo sugo ammaanka? Duqa Gaalkacyo Siciid.
Magaalada Gaalkacyo oo hooy u noqotay falalka amni-daradda lidi-ga ku ah, horayna maamulka Puntland loogu dhaliili-jiray xaalada Gaalkacyo Puntland inay gacmaha ka laabtay ayaa waxaa muuqata dadaalo ay dawladdu rabto inay kusoo celiso nidaamkii, nabad-galadii iyo kala-dambayntii Gaalkacyo horay loogu bartay.
C/risaaq Cali ?Silfar?
Radio D. Gaalkacyo.